Sarkaal Ka Tirsan Wasaaradda Dalxiiska Oo Ka Dayriyay Fadhataysi Lagu Hayo Goobaha Aataarta Qadiimiga Ah Ee Somaliland |
Sarkaal Ka Tirsan Wasaaradda Dalxiiska Oo Ka Dayriyay Fadhataysi Lagu Hayo Goobaha Aataarta Qadiimiga Ah Ee Somaliland
Hargaysa(GNN):-Sahamiyaha Ataarta qadiimiga ah ee Somaliland Maxamed Cabdi Cali, ayaa walaac xoogan ka muujiyay fadhataysi iyo bililiqaysi baahsan oo lagu hayo goobaha ay ku yaallaan aataarta qadiimiga ah ee dalka Somaliland.
Maxamed Cabdi Cali oo xalay u waramayay wargeyska DAWAN, ayaa waxa uu ku dhaliilay Maayarrada magaalooyinka waaweyn ee dalka in aanay iska xil saarin ilaalinta goobaha aataarta qadiimiga ah isla markaana aanay waxba ka qaban boobka lagu hayo goobahaas.
Sarkaalkaasi waxa uu sharaxaad ka bixiyay tirada goobaha aataarta qadiimiga ah ee Somaliland. “Goobaha aataarta qadiimiga ahi waa 140 goobood oo isku jira kuwo sawiro leh oo qeybihii dekadihii burburay ku jiraan oo dhulka xeebaha u badan. waxa kale oo jira xiligii Islaamku ina soo gaadhay masaajidadii la dhisay, laakiin qaar baa sideed meelood ku kala yaalla, sida dhaymoole oo kale iyo Laasodacawo, ama Boorama goobo ka mid ah iyo Geel ka qor oo kale oo aad arkayso sawiradii Geelle oo soocan waxaanay ku tallaa goobtaasi barriga Sanaag,”ayuu yidhi Maxamed Cabdi.
Sahmiyaha aataarta qadiimiga ahi waxa kale oo uu intaa ku daray “Markaa goobahaas gobolka Sanaag way ku wada sawiran yihiin Geella iyo Adhiguba, markaa waxa dhibaato naga haysataa imika 16 goobood oo ay ka mid tahay qaarkoodna kaba baxeen aataartii qadiimiga ahayd sida Qoor-gaabta oo Boorama ku taalla, Ex Cammuud ayaa iyana ka badbaado u baahan goobahaas oo dhammaantood ku yaalla magaaladda Boorama. Waxa mushkiladda loo baabiinayaa ka dhalatay ka dib markii magaaladdii ku fiday oo ay gaadhay. markaa iska rogooyinkii dhagixii ayay ka guranayaan, dadkiina wuu bililiqaysanayaa, maayarraduna ma danaynayaan dhulkan dalku leeyahay ee aasaarta qadiimiga ah ee waalidiinteen aynu ka dhaxalnay, taariikhdeenu aad ayay u fog tahay markaad eegto geeska afrika illaa iyo dadkii hore markaa Awdal oo ah wadankii aabayaasha ayaa waxa ku yaalla magaalooyin aad u faro badan kuwaasi oo intooda badan fadhato ka socoto.”
Maxamed Cabdi oo aanu weydiinay caqabadaha ugu weyn ee xiligan haysata goobaha aataarta qadiimiga ah, waxaanu ku jawaabay “Waxa dhibta koowaad naga haysataa oo haddii ay nala shaqeeyaan wax weyn nala qaban lahaa maayarrada magaalooyinka Somaliland. Waxa ugu daran meelaha la fadhataysanayo raadadkii aataarta qadiimiga ah gobollada Saaxil, Awdal iyo Sanaag, saddexdaa gobal waxa ay gaadheen magaalooyin dunsanaa oo Maayirradoodu qeybiyeen, runtii waanu u sheegnaa maayarrada oo warqada wasaarada dhalinyarada iyo dalxiisku u qorto ma tixgaliyaan.”
“Baarlamaanka waxaan leeyahay si deg-dega ha u sameeyaan xeerkii aataarta qadiimiga, waayo haddii aanu soo qabano qofkii fadhataysanayay sharcigii lagu soo ciqaabayay ayaan jirin,”ayuu yidhi Maxamed Cabdi, waxaanu tilmaamay in 140 goobood ay u hayaan shaqaale ilaaliya 34 goobood oo kaliya.
Sahmiyaha koowaad ee aataarta qadiimiga ahi waxa uu intaas ku daray in haddii dhaqaale la geliyo goobaha aataarta qadiimiga ah ee Somaliland inay ka soo bixi lahayd dalxiiseyaasha lacago aad u badan oo horumarinta dalka kaalin togan ku yeelata.